Brezila: “Kilombos”, Tantaran’Andevo Mampifandray Kaontinanta Telo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2012 8:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, عربي, Español, Português
Andro vitsy taorian'ny nampiatoan’ny governemanta Breziliana mandritra ny dimy volana ny famerenana ny fizakàna ny maha-tompony nangatahan'ny Tafika an-dranomasina ny tany ao Quilombo Rio dos Macacos any Bahia – iray tranainy indrindra amin'ireo vondrom-piarahamonin'ny zanak'andevo any Brezila, onenan'ny fianakaviana 75 [pt] eo ho eo -, amin'ny lafy iray amin'ny Atlantika, ao Lisbon, tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa no natao ny zaikabe iraisam-pirenena “Ny fikisahan'i Quilombos: avy any Afrika ho an'ny Brezila ary ny fiverenana amin'izay niaviana” [pt].
Ity fihaonana ity no namoahana ny fanadihadiana firaketana atao hoe Kilombos, novokarin'ny mpanao gazety iray teratany Portiogey, Paulo Nuno Vicente, ary nofariparitany [pt] tao amin'ny tranonkala ‘Buala’ ho ny “lahatsary iray fanavotana ny Quilombos avy ao Brezila”, izay “mitondra antsika hamakivaky ireo lovantsofin'ny fitantaràna am-bava ny fiaviana Afrikana ananan'ireo vondrom-piarahamonina Quilombo, mampiseho ny fifanenan'ireny fiaviana ireny amin'ny fomba aman-kolontsain'ny vanim-potoana”.
Ny toe-po mahatsapa ho mifamatotra aminà famaritàna iray dia mandrava ny sakana napetraky ny tahotra. Ny maha-‘Quilombola’ dia lasa lavitry ny sehatra. Sary iray maharitra lavitra noho izay asehony. ‘Kilombos’ dia ezaka iray hamaritana sarintany antrôpôlôzika momba ny fifanaritahana ao Brezila tanatin'ny vanim-potoana iray, izany hoe, ny herin'ny fanatontoloana amin'ny lafiny iray, ary ny fomba nentin-drazana amin'ny fifamezivezena amin'ny lafiny hafa.
31.3% tamin'ireo Afrikana natao andevo no nentina tany Brezila. Sary an'i Hollywoodsmille78 tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Ilay fanadihadiana, nalaina sary indrindra indrindra tao amin'ny fari-panjakana Breziliana Maranhão, nefa koa tao Cape Verde sy Guinea-Bissau, dia manome ny ampahany amin'ny tetikasa isaky ny telo taona [pt] tohanan'ny ONG Portioge iray, Instituto Marquês Vale de Flor (IMVF), miara-miasa amin'ireo fikambanana mpanohana avy ao an-toerana :
Ny nisafidianana ireo firenena telo ireo dia miainga avy amin'ny tantara iraisan'ny lasan'izy ireo. Ireo sambo nitatitra ireo andevo hatao hery mpamokatra niala ny morontsiraka Afrikana ho any Brezila dia mazàna no nanao ny fiatoany voalohany tao Cape Verde. Io làlana an-dranomasina io izay nampifandrohy ireo tany telo ireo efa ho maherin'ny taonjato efatra lasa izao dia namela marika izay mbola hita taratra hatramin'ny anio.
Tsy nihonona fotsiny tamin'ny fitaterana lehilahy amam-behivavy ho any Brezila ireny sambo ireny. Nitatitra fomban-drazana, finoana sy fomba amam-panao ihany koa izy ireny, izay mbola hajaina sy ampiharina any amin'ireo firenentsika telo ireo hatramin'ny androany.
Hatramin'ny nibodoan'ireo voanjo Portioge mpanjanaka an'i Cape Verde tany amin'ny tapaky ny taonjato faha-15 tany, dia nanjary lasa “toeram-panakalozana andevo teo amin'i Afrika sy Amerika” ilay nosy, hoy i José Semedo, avy ao Praia, tao anaty tafatafa [pt] iray ho an'ny fanadihadiana ‘Kilombos’
“Araka ny angona natao tamin'izany fotoana, ny antsasak'ireo Afrikana natao andevo tonga tao Maranhão teo anelanelan'ny 1774 sy 1799 no nobaboina tany Guinea-Bissau”, hoy i Eduardo Mello manamarika [pt] , avy ao amin'ny bilaogy Jovens Diplomatas (Diplaomaty Tanora), anatinà lahatsoratra iray izay manome antsika ny fomba fahatsapany mikasika ny fiverenan'ireo Quilombolas any amin'ny niaviany any Cacheu, taonjato telo aty aoriana, izay ny tetikasa IMVF
Quilombo Santa Joana – tafatafa niarahana tamin'i João Baptista. Sary nalaina avy amin'ilay fanadihadiana Kilombos.
“Vavolombelona isika ary mangirifiry noho ny sorona nataon'ny mainty”, hoy i Mello manamarika [pt] ny andron'ny fankalazàna tao Cacheu, izay nilalaovana tantara an-tsehatra iray tao anatin'izany, nenti-naneho ny fanondranana andevo tany amin'ny taonjato faha-17, izay ifanolanan'ireo samy taranaky ny andevo Afrikana ihany koa, mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Quilombo ao Maranhão – “ny zava-doza teny anaty sambo, mikasika ny fanovàna an'i Amerika sy Brezila, nihira izy ireny. Nitomany izy ireny”:
Eo akaikin'ny Ala masina Cobiana, misy vahoaka mankalaza ny fitambàrana indray tamin'ireo niverina an-tanindrazana, izay isaky ny fehezanteny tsirairay, fomba fahandro, feo sy fomba fanehoana, dia miezaka ny mamerina mamantatra indray ny fiaviana sy ny tanjona haleha. Androany, ny tanàna dia voahaingo tamin-javamaneno fanaovana mozika, asa tànana, voankazo ary ireo tantara iombonana. Ny sakafo ‘cuxá’ avy ao Maranhão dia mitovy amin'ny ‘baguitche’ an'ny Gineana – na ny foko Mandinga aza dia niantso azy io foana hoe ‘cuxá’.
Ny haizina mirotsaka no manomboka mandoko ny Renirano mikoriana malaky ao Cacheu ho toy ny volafotsy. Mifangaro amin'ny an'ireo Quilombolas Breziliana ny fisehoana an-tsehatry ry zareo Gineana, ny feon'i Eneida Marta, ary ireo lahateny. (…)
Mihira ireo tarika, mandihy, mihanika hazo, mankalaza ny endrika hafahafan'ilay fahitàna ireo havana nosarahan'ny taonjato maro. Gineana no lasitra, saingy betsaka no niova: ny hiranay dia tsy natao ho an'izany sy momba ny tany, resaka filatroana izy ireny; ny gadona nofinidin'ny foko tsirairay dia nifangaroharo tao Brezila niaraka tamin'ny firaondraonan'ireo olona marobe hafa avy amin'ny kaontinanta Afrikana, tao anatin'ny vilaniben'ireo mpanentana ilay fetibe karnivaly (na “N’tturudu”, araka ny fiantson-dry zareo azy)
“Ny tantaran'ireo Quilombos dia iray miresaka fahalalahana sy maha-olona “
Dikasary avy amin'ilay fanadihadiana Kilombos.
Araka ny ambaran'i Mello , “betsaka no niova” teo amin'izay mari-pamantarana manokana ity kolontsaina ity, izay ao anatin'ny tenin'ny [pt] mpamokatra ny ‘Kilombos’, dia “miampita mihoatra ny sisintany ary mitondra ireo kaontinanta hifanakaiky kokoa”. Kanefa, ary ny fiverenan'ireo Quilombo Rio dos Macacos voalaza ao anatin'ilay andininy misokatra ao amin'ity lahatsoratra ity, ny adin'ireo Quilombolas misy ankehitriny dia mampiseho fa misy koa ny karazana fitohizana eo amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny, toy ny zo hanana tany.
Alan Tygel, avy amin'ny Vírus Planetário [Planetary Virus], dia mametraka fitantarana an-jorony, ary miresaka ny “fomba fanao maoderina” [pt] izay mitondra antsika indray mandeha indray hitsangatsangana eo anelanelan'ny fotoana sy ireo toerana :
Efa hilentika izao ny masoandro, ary ireo andevo dia mandany ny fotoana sisa amin'ity hariva ity hialàna sasatra noho ny harerahana nentin'ny andro tontolo tao an-tanànan'ireo andevo. Mafy ny asa any amin'ny fanodinana fary any. Voakaravasy, voarohy rojo vy, lavitry ny tany niaviany, tafasaraka amin'ny fianakaviany, mbola mampiasa ny capoeira sy ny fiderana ny andriamaniny ireo andevo. Ny androtr'io dia olona roa no nandositra avy tao amin'ilay toeram-pambolena : Zé Preto dia nanandrana niafina nanaraka ny kirihitra ‘amandes’. Almeida, ilay olona nomena adidy hisaombotra ireo mandositra, dia tsy nanano-sarotra loatra tamin'ny fisamborana azy: efa reraka ilay andevo, nandositra noho ny tsy fanànany fanantenana izy. Ny kapoka karavasy azony avy hatrany tamin'io, tany an'ala, dia ampy namàrana ny hirifiriny sy nitondra azy ho aminà fiainana hafa indray. Tsy nanam-bintana i Gangá: nalefa tany am-ponja, sy nijanona tany nandritra ny andro maro izy. Natao izany hahalalàn'ny rehetra ny miandry izay andevo manandrana ny handositra.
Taminà toerana iray tsy lavitra loatra ny teo, telonjato taona teo ho eo taty aoriana, tsy dia niova loatra ny zava-misy. Ho an'ireo mponina ao Quilombo Rio dos Macacos, sahala amin'ny hoe nofoanana ny fanandevozana dia niverina indray avy eo. Maro amin'izy ireo no mbola nahatahiry sarin'ireo ray aman-drenibe nitafy vorodamba eny ampiasàna tao amin'ilay toeram-pambolena. Ny zokiolona indrindra dia mahatadidy ny ‘jongo’, ny capoeira sy ny Samba de Roda teo anivon'ny vondrom-piarahamoniny, rehefa misy iravoravoan-dry zareo iny, any ambanivohitry ry zareo, miaraka amin'ny trondro, ny dihy ary ny finoany. Teo amin'ny telopolo taona lasa izao, dia nanjary toy ny andevozina indray ry zareo.
Misy fanangonan-tsonia [pt] iray mitohy mihodinkodina mangataka ny fizakàna ny maha-tompony an'i Quilombo Rio dos Macacos hijanona ho isan'ny Quilombolas, izay nahazo fanomezan-toky hatreto fa hoe tsy hohesorina ry zareo ato anatin'ny efatra volana manaraka, mandritra ny fotoana izay tsy maintsy hanaovan'ny Incra [pt] (Ivontoeram-Pirenena Momba ny Fanjanahana sy ny Fanavaozana ny Fananan-tany) fehin-teny anaty tatitra ara-teknika momba ny Famantarana sy Famaritana, miaraka amin'ny filazana ny hoe hatramin'ny oviana no efa nipetrahana ilay toerana.